August 29, 2019 - Myitter
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သေဒဏ်အမိန့်ချမှတ်ခံထားရသောအကျဉ်းသားများအား မည်သို့သေဒဏ်ပေးသနည်း…
August 29, 2019 Myitter 0
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သေဒဏ်အမိန့်ချမှတ်ခံထားရသောအကျဉ်းသားများအား မည်သို့သေဒဏ်ပေးသနည်း… ခဏလေးအချိန်ပေးပြီးဖတ်ကြည့်ပါ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သေဒဏ်ကျအကျဉ်းသားများ၏နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးမှာ ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးမှ သေဒဏ်ကျအကျဉ်းသားအတွက်မေတ္တာကရုဏာရှေ့ထားကာ သေဒဏ်အမိန့်မှလွတ်မြောက်ပြီး ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျခံစေရန်လျှော့ပေါ့ပေးသည့်အခွင့်အရေးသည် အမိန့်ချမှတ်သည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းသာမျှော်လင့်နိုင်ပါသည် ၊ ဤသည်မှာလည်း ၁၀၀ မှာ ၁ ယောက်ပင်ရဘို့အခွင့်အရေးအင်မတန်နည်းပါးလွန်းသည်ဟုဆိုရပါမည် ။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်၍ ဘုရင်မင်းမြတ်မှ နန်းတက်သည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ရွှေစိတ်တော်ရွှင်ပြုံး၍ ပေးမည်ဆိုလျှင်တောင် […]
ကျမအကြောင်းလေး ဖတ်ချင်တဲ့သူအတွက်.. ကျမဘဝရဲ့ မှတ်တမ်း သမီးအဖေနဲ့က ကျမ ၁၀ တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီး အောင်စာရင်းထွက်ခါနီးမှာ မထင်မှတ်ပဲ ရသွားခဲ့တာပါ.. ကျမ အိမ်ထောင်ကျပြီး ၅ နှစ်အကြာမှ သမီးကို ကိုယ်ဝန်စရှိခဲ့တာပါ.. သမီးလေးကို ၂၀/၃/၂၀၀၃ မှာမွေးခဲ့တယ်.. မိဘတွေသဘောမတူလို့ သူ့အိမ်မှာပဲ လိုက်နေခဲ့ရတယ်.. ကိုယ့်ယောက်ျားအဝတ်ကို တခြားသူလျှော်တာ […]
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုအယူခံရှုံးနိမ့်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသူ ကိုထူးချစ်၏ ပြောကြားချက်များ
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း လိပ်ကျွန်း (ခိုတောင်ကျွန်း)မှာ ဗြိတိန်လူမျိုး (၂) ဦး အသတ်ခံရမှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇော်လင်းနဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်းတို့ရဲ့ နောက်ဆုံး အယူခံ ရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့အနီး နွန်ထဘူရီခရိုင် တရားရုံးက ဒီအမိန့်ကို ဖတ်ကြားပေးခဲ့ပြီး အယူခံ ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အတွက် သေဒဏ်ကို ဆက်လက် အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ […]
ပြိုင်ပွဲဇယားထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်းချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ မကြာမီယွဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ရေတာ့မယ့် အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ကာကွယ်ပွဲကို ပရိသတ်တွေလည်း ရင်ခုန်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အသက် ၄၁နွစ် အရွယ်ရွိ ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ချန်ပီယံ ဘရန်ဒန် ဗီရာနဲ့ထိုးသတ်ရမွာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက်ဖိုက်တာဗီရာကေတာ့ အရပ် ၆ပေ ၃လက်မရွိပြီး MMA ပွဲပေါင်း ၂၄ပွဲမွာ ၁၆ပွဲနိုင်ထားပြီး ရပွဲ […]
ဆင်းရဲချို့တဲ့သူ ၂ ထောင်ကျော်ကို ဆန်တစ်အိတ်စီလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အိမ်မဲမြို့ ပဒေသာစတိုးမိသားစုရဲ့သာဓုခေါ်စရာအလှူ မြတ်စုအောင်/ဧရာဝတီတိုင်းမ် (အိမ်မဲ) သြဂုတ် ၂၉ ရက် ငွေရှိတဲ့သူအတွက် ဆန်တစ်အိတ်ဝယ်ဖို့ မခက်ခဲပေမယ့် တနေ့လုပ်မှ တနေ့စားရတဲ့ စီးပွားဥစ္စာချို့တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဆန်ကိုအိတ်လိုက် ဝယ်စားဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲကြပါတယ်။ ဒီလို ဆင်းရဲချို့တဲ့သူ မိသားစုတွေ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးတဲ့ […]
ဖြစ်စဉ်မှာ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်၌ ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်မြို့တွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ကျဉ်ဆံများဖမ်းဆီးရရှိမှု ကွင်းဆက်အဖြစ် မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊၄၁လမ်း၊၇၁လမ်းနှင့်၇၂လမ်းကြား၊တက္ကသိုလ်တိုက်တန်း အခန်းအမှတ် J (1/2) တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စမိုင်း ဖိနပ်အမျိုးမျိုးအရောင်းဆိုင် အပေါ်ထပ်မှ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊နံနက် ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်က လက်နက်တစ်ချို့ […]
ဝင်းနှင့် ဇော် နောက်ဆုံးအယူခံရူံးနိမ့်ကာ သေဒဏ်ကို ဆက်လက်အတည်ပြု….
ဝင်းနှင့် ဇော် နောက်ဆုံးအယူခံရူံးနိမ့်၊ သေဒဏ်ကို ဆက်လက်အတည်ပြု…. လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုဖြင့် သေဒဏ်ကျနေသော မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး၏ နောက်ဆုံးအယူခံကို ထိုင်းတရားရုံးက အမိန့်ချရာ အယူခံရူံးနှိမ့်ပြီး သေဒဏ်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည်….. ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နွန်ထဘုရီခရိုင်တရားရုံးတွင် တရားသူကြီးက မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးဖြစ်သော ဝင်းဇော်ထွန်းနှင့် ဇော်လင်းတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ တရားရုံးရှေ့ရောက်ရှိနေသည့် […]
မုံရွာမြို့နေ ဦးစိုးသန်းသည် အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလတွင် အသည်းကင်ဆာ ဝေဒနာကို စတင်ခံစားခဲ့ရရာ ဆရာဝန်များက သုံးလသာ ခံတော့မည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ငါးလအတွင်း ကင်ဆာဆဲလ် လုံးဝမတွေ့တော့ဘဲ သက်သာခဲ့သဖြင့် သူ၏ ဆေးကုသမှု အတွေ့အကြုံ များကို အခြားကင်ဆာဝေဒနာရှင်များ သိရှိသဘောပေါက်နားလည် စေရန် […]
“ဦးလေးက ဒီရွာကလား ခင်​ဗျ “… “အေး ဟုတ်​ပါတယ်​ ဘာကိစ္စရှိလို့လည်း ကွဲ့ ” “ဟုတ်​ကဲ့ပါ ဟိုဖက်​ကရွာမှာ ခါးအောက်​ပိုင်းပြတ်​နေတဲ့ ကလေးတွေများ ရှိလေမလား လို့ပါ ဦးလေး ရယ်​ ” ” ဟ မ်​ … … … ” […]
” လောကီလွန် “ ခေတ်ပညာတတ်ဆိုပြီးလောကီလွန်ကိစ္စရပ်တွေကို စုံကန်မရတာတွေရှိတယ်အရာရာမှာ အစွန်းမကျဖို့ပဲလိုပြီး၊ အဂတိကင်းကင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန် တွက်ချက်ရှုမြင်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်၊ လဒလောက်တော့ငှက်တိုင်းလှတယ်ဆိုတဲ့စကားအတော်လေးရေပန်းစားဖူးတယ် ရွှေတိဂုံမှာ လဒ (၃) ကောင်နားသွားတယ်ငှက်ခေတ်ဖြစ်လာတယ်၊နားပုံကိုကြည့်ရင် (၂) ကောင်ကညောင်နာနာနဲ့အလယ်ကောင်ကစွာဟန်ရှိတယ်၊အလယ်ကောင်နဲ့တတိယကောင်က မျက်နှာခြင်းဆိုင်ပထမကောင်ထက်ပိုပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြတယ် ဒါပေမဲ့ ကြာမှောက်ကြာလှန်အဆင့်ထိမှာပဲနားလို့ထိတ်ဆုံးမရောက်နှိုင်ဘူးငှက် (၃)ကောင်ပျောက်ပြီးရင်ပွဲပြီးသွားပြီ၊ဗိုတထောင်မှာ ဆင်းတုတော်ကြိုးချည်ခံရတယ် အတော်အောက်တန်းကျတဲ့အောက်လမ်းနည်းအစီအရင်ပဲဆင်းတုတော်နော်… အာလုံးကအထွတ်အမြတ်ထားရာအဲ့ဒီရဲ့ဒါဏ်က မရှုမလှပဲအစီအရင်လုပ်တဲ့သူတွေ ချည်နှောင်ခံရမဲ့နိမိတ်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ကြီး […]